Wonderful Bama King and his Mayor donated Masjids in Mandalay | Lumyo Chit
These comments are the responses after reading this upload by my No. 5th. brother Mg Mg :ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ကျောင်းတကာဆိုပေမဲ့ မန္တလေးရဲ့ မြို့တော်ဝန်လဲဖြစ်တယ်လေ။ စာရေးဆရာမကြီးယုဝတီခင်စိန်လှိုင်ရဲ့အဖိုးတော်မှာပေါ့၊ Read the rest of this entry »
← General Aung San’s letter toaBurmese Muslim Comrade
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ဝါဒ စွဲကိုင်ထားဆဲ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ →